EndeavorOS Inosunungura Gumiguru Shanduro neLinux 5.3.6 | Linux Vakapindwa muropa
Nguva inowanzoisa zvese munzvimbo yazvo. Ndo zvakaitika naAntergos, imwe yeanonyanya kufarirwa Arch Linux-yakavakirwa kugovera iri zhizha. akazivisa kupera kwebasa rake. Izvo hazvina kutora nguva kuti timu nyowani yevagadziri vatore kodhi, asi sezvo vasina kufanana, vakafunga kushandura zita rive EdzaOS, kugovera uko nhasi kwatangisa vhezheni itsva.
Kana isu tichitaura nezvevhezheni nyowani yeanoshanda sisitimu EndeavorOS, isu tinofanirwa kuve pachena kuti isu tiri kureva chete kune ayo ISO mifananidzo. Iyo yekuvandudza modhi yainoshandisa yakafanana neArch Linux, ndiko kuti, chii chinozivikanwa se "Rolling Release" icho isu tinoisa kamwe uye tinokwanisa kugadzirisa zvachose. Nezve izvi zvatsanangurwa, iyo Gumiguru vhezheni ye EndeavorOS hachisi chinhu kunze kwechifananidzo chitsva icho chinosanganisira ese mitsva maficha akatoburitswa muhurongwa hwekushandisa.
EndeavorOS Gumiguru kuburitswa inosanganisira Firefox 69.0.3
Pakati pezvinhu zvitsva zvinowanikwa mumufananidzo mutsva, musimboti wayo kana yazvino vhezheni yeFirefox inomira pachena:
Mutsva wekugamuchira wekutanga. Iye zvino anotikoka kuti tiise UFW, LibreOffice, Chromium uye maneja weBluetooth weXfce.
Ivo vabvisa xf86-vhidhiyo-nouveau package kuti vashandise mod-yekuisa mutyairi kubva kuLinux kernel.
Calamares haichatarise kwekuvandudzwa nekuti yakadzora danho rekumisikidza revazhinji vashandisi. Iko mukana iko zvino kwapihwa mumenu yekutambira mushure mekumisikidzwa.
Iyo itsva ISO mufananidzo inowanikwa kubva Iyi link. Sekutsanangura kunoita timu yeEndeavorOS yekuvandudza, iyo mifananidzo mitsva ndeye yekuisa nyowani chete; Vashandisi varipo vanogona kuwana zvese zvakataurwa muchinyorwa chino nekuvandudza kubva mukati meiyo sisitimu yekushandisa, iyo inobvumidza kuvandudzwa pavanongogadzirira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » EndeavorOS inoramba ichienderera kumberi, Gumiguru kuburitswa kunosvika neLinux 5.3.6